XOG: Maxaa ka ogtahay Shirkada Al-khayraad ee uu leeyahay Madaxweyne Xasan Shiikh? – Kismaayo24 News Agency
XOG: Maxaa ka ogtahay Shirkada Al-khayraad ee uu leeyahay Madaxweyne Xasan Shiikh?
by admin 21st November 2016 21st November 2016 4 78
Shirkada Al-Khayraad ayaa waxaa la aasaasay sanadkii 2010, oo ah laba sano ka hor xilliga la doortay Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Xasan Shiikh Maxamuud, waxaana ujeedka loo sameystay ahaa in lagu helo qandaraasyo dhaqaale badan ku baxayo.
Waxaa shirkadan la wada dhistay Madaxweyne Xasan Shiikh iyo Sadaq Abdikarim oo ah agaasimiye kuxigeenka madaxtooyada ee xilligan, dhawaana si musuqmaasuq ah loogu doortay xilka xildhibaanimo ee ka dhacday degmada Cadaado.
Waxaa markii ay xilka qabteen bilowday inay shirkadaasi si sharcidaro ah oo u muuqata dhac toos ah ula wareegtay qandaraas lagu dhisayey wadada wadnaha, oo la siiyey shirkad kale oo Soomaaliyeed, taasi oo ka horeysay xilliga la doortay Xasan Shiikh Maxamuud.
“Madaxweyne Xasan Shiikh iyo Sadaq Abdikariim, ayaa si toos ah ula hadlay dowlada Turkiga oo qandaraasta wadada wadnaha bixineysay, waxaana ay ugu hanjabeen inay qandaraaskaasi burburin doonaan, haddii aan lagu soo wareejin shirkada Al-khayraad oo ah mida ay iyaga leeyihiin, taasina waxay keentay in howshii laga qaado muwaadiniintii kale ee Soomaaliyeed” ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan madaxda shirkada Al-Khayraad oo xaalado ammaan darteed aan u qarinay magaciisa.
Waa Xasan iyo Sadaq oo ah milkiilayaasha shirkada Al-Khayraad!!.
Waxaa uu intaasi ku daray inuu qandaraaskaasi ku baxay lacag dhan 23 milyan oo dollar, haddana aysan jirin wax muuqda oo ay qabatay shirkada Xasan Shiikh Maxamuud iyo Sadaq Abdikariim.
“Haddii ay qandaraaskii xoog kula wareegeen, haddana aysan shaqadii si fiican u qaban, waxay ka marqaati kaceysaa in Xasan iyo Sadaq ka mideysan yihiin burburinta iyo curyaaminta dalkan” ayuu yiri Maxamed Ali Aden, oo ka mid ah aqoonyahanka sida dhaw ula socda howlaha shirkada Al-khayraad.
Sidoo kale, waxaa ay qandaraas lacag badan ku baxday ka qaateen muwaadin kale oo helay barnaamij la xiriira Civil Aviation ka garoonka Muqdisho, si la mid ah kii hore ayey dhaqaalihii ku baxayey ku shubteen bangiyadooda, islamarkaana aysan waxba uga qaban waxa lagu siiyey lacagtaasi. Mana jirto hay’ad la xisaabtami karta, maadaama awoodii ugu sareysayba uu fadhiyo milkiilaha ahna aasaasaha shirkada Al-khayraad.
Dhinaca kale, maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed ayaa walaac weyn ka muujiyey qandaraasyo dib loogu dayactirayo xabsiyada magaalooyinka Baydhabo iyo Kismaayo, islamarkaana kuwa cusub oo kalana loogu dhisayo, oo la siiyey shirkada Al-Khayraad, iyagoona cadeeyey inaysan ilaa hadda wax ay ka qabteen howshaasi jirin.
Waxaana ay intaasi ku dareen inay xarumaha lacagaha soo marsiiyey Al-khayraad ay gaarsiin doonaan arrintaasi, islamarkaana ay dowlada cusub haddii ay noqoto mid aan hoggaankeeda uusan heysan Xasan Shiikh ay maxkamad kula tiigsan doonaan. Maxaa yeelay waa hanti qaran oo ay lunsadeen Xasan Shiikh Maxamuud iyo Sadaq Abdikariim.
Waxaa dalka Soomaaliya ayaa waxaa ayaandaro weyn ku dhaceysaa haddii labadaasi shaqsi ee dhaca muuqda ku geysanaya magaca dowlada, ee u sameystay shirkada Al-khayraad, uu midna hadda u soo noqday xildhibaan, midka kalana uu uu dhaqaale xooggan ku bixinayo sidii uu kusii joogi lagaa xilka Madaxweynenimo.
Warbixinta soo bandhigista musuqmaasuqa hoggaanka Xasan Shiikh iyo shirkadaha ay kala sameysteen isaga, Sadaq, Xaasaskiisa iyo walaalihiisa kala ah Ali Shiikh iyo Xuseen Shiikh, waa warbixino taxane inoo noqon doona ilaa laga helayo xukun cadaalad ah oo la xisaabtama, ujeedka aan ka leenahayna waa in ummadda Soomaaliyeed ay si aan caad ka saarneyn ula socdaan boobka xargaha gooyey ee Xasan Shiikh iyo taliskiisa dhamaaday.
TOP NEWS: Dhageyso Maxaadan Ogeyn oo Saakay ka Cusub Magaalada Gakacyo iyadoo Ciidamo ka tirsan Kumaandoosta Soomaliya ay…..
Akhriso: Tirada Guud ee Xildhibaanada Aqalka Hoose iyo Aqalka sare ee Ilaa iyo Hada la doortay
TOP NEWS: Maxaad kala Socotaa Shirweynaha Saxafiyiinta Soomaaliyed oo Maalintii Labaad Muqdisho ka Socda ( Sawirro )
VIDEO: Qurbo joogta Dalka kusoo Laabata oo Dhibaatooyin Badan kala kulma Garoonka Aadan Cadde